किन टिक्दैन धनाड्यहरूको विवाह ? बिल गेट्स र बेजोसपछि गुगलका सह-सस्थापक सेर्गेको सम्बन्ध बिच्छेद | आर्थिक अभियान
किन टिक्दैन धनाड्यहरूको विवाह ? बिल गेट्स र बेजोसपछि गुगलका सह-सस्थापक सेर्गेको सम्बन्ध बिच्छेद
Photo : bloomberg.com
सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय सर्च इञ्जिन कम्पनी गुगल (Google) का सह–संस्थापक सेर्गे ब्रिन पनि अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमाजनका संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोसकै बाटोमा जाने भएका छन् ।
विश्वका सातौं धनी व्यक्ति समेत रहेका ब्रिनले आफ्ना श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद माग्दै आवेदन दिएका छन् । पछिल्लो समय अति धनाढ्यहरुमाझ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ । उनले यही महीना निकोल शानाहानसँगको चार वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्ग्याउन सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै याचिका दायर गरेका छन् । उनीहरुबीच अपूरणीय अन्तरहरु रहेको अदातलमा पेश गरिएको कागजपत्रमा उनले बताएका छन् ।
हाई प्रोफाइल सम्बन्ध भएकोले धेरैको चासो उनीहरुको सम्बन्ध बिच्छेद र तीन वर्षिय छोरीको रेखदेखको जिम्मा कसले पाउला भन्नेमा रहने भएकोले पारपाचुकेका विवरणहरुलाई ब्रिन दम्पत्तिले गोग्य राख्न खोजेका छन् । ब्रिन दम्पत्तिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको भनेर यस अघि बिजनेश इन्साइडरले समाचार छापेको थियो ।
४८ वर्षिय ब्रिनसँग ९४ अर्ब डलरको नेटवर्थ रहेको ब्लुम्बर्ग बिलेनियर इन्डेक्सले देखाएको छ । उनको अधिकांश स्वामित्व गूगलको शेयरमा छ । उनले सन् १९९८ मा ल्यारी पेजसँग मिलेर गुगलको स्थापना गरेका थिए । सन् २०१९ मा ब्रिन र पेजले गुगल छाडेका थिए । यद्यपि, दुबै जना अहिले पनि गुगलको मातृ कम्पनीको सञ्चालक समितिमा छन् ।
उनीहरुसँग अल्फाबेटको बहुमत शेयर छ । ब्रिनले यस अघि सन् २०१५ मा २३ एन्ड मीकी संह–संस्थापक एने वोजसीक्सीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए । उक्त सम्बन्ध बिच्छेद पछि दुई जनाले डेटिङ शुरु गरेका थिए । यी दुईको सन् २०१८ को नोभेम्बरमा विवाह भएको थियो । दुबै जना सन् २०२१ को डिसेम्बर १५ देखि छुट्टाछुट्टै बस्न थालेका थिए । ब्रिन दम्पत्तिको एक छोरी छन् । ब्रिनले श्रीमतिसँग कुनै खालको सहायता वा सहयोग मागेका छैनन् । उनले पनि नदिने बताएका छन् ।
ब्रिन र शानहानको सम्बन्ध उनी अर्बपति भएको कयौं वर्षपछि शुरु भएको थियो । दुई जनाबीच समबन्ध बिच्छेदबारे अग्रिम सम्झौता भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ । मुद्दा निजी न्यायाधिसले हेरिरहेकोले सम्बन्ध बिच्छेदको थप विवरणहरु अज्ञात छन् । सम्बन्ध बिच्छेदपछि ब्रिनकी श्रमितिले कति पाउँछिन् भन्ने पनि अज्ञात छ ।
गत वर्ष बिल गेट्स (Bill Gates) र मेलिन्दा गेट्स एवम् जेफ बेजोस (Jeff Bezos) र म्याकिन्जे स्कटबीचको सम्बन्ध बिच्छेदले पनि निकै चर्चा बटुलेको थियो । गेट्स दम्पत्तिले आफ्नो २७ वर्षको विवाह सम्बन्ध टुङ्ग्याएका थिए भने बेजोस दम्पत्तिले पनि २५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध अन्त्य गरेका थिए । एजेन्सी